बिहानै कुनै काम गर्नु अगाडि गर्नुहोस् यी काम, ठुलो विपद वा समस्या टर्ने विश्वास ! – Krazy NepaL
April 15, 2021 533
काठमाडौँ । हिन्दु शास्त्रमा जीवन शैलीलाई सकारात्मक तरिकाले चलाउन विभिन्न नियम र मान्यताहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ । यसैक्रममा दिनको सुरुवातलाई लिएर हिन्दु धर्ममा चर्चा गरिएको मान्यताहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
दिनको सुरुवातमा यसो गर्नुहोस:
स्नान– बिहान नुहाएर मात्र भान्छामा पस्नुपर्ने शास्त्र बताउँछ । स्वास्थ्यको दृष्टीबाट पनि बिहानको स्नान उपयोगी हुन्छ ।भगवानको दर्शन-जो मानिस बिहान उठी स्नान गरि केही बेर भगवानको पुजा आराधना गर्छ उसको दिन शुभ बित्नेछ । भगवानको दर्शनले मनमा शान्ती आउँछ र मन शुद्ध हुन्छ ।
हातको औँलामा लगाउनुहोस् यसरी बनेको कछुवाको औँठी, चम्काउन सक्छ तपाईको…
शास्त्रअनुसार यी हुन् युवतीमा खोजिने ३२ गुण, तपाईमा छ त ?
शुद्ध मन र स्वस्थ्य शरिरले विचार शुद्ध हुन्छ । शुद्ध विचार सफलताको प्रतिक हो ।तुलसीलाई जल चढाउनु र सेवन गर्नु– भनिन्छ कि बिना स्नान गरि तुलसी नछुनु । आयुर्वेदमा विशेष महत्व दिइने तुलसीको सेवन स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम हुन्छ।
घरमा निस्कनु अघि ठुलाको आशीर्वाद लिन बिर्सन हुँदैन । जसले मानसम्मान दिन जान्छ उसले मानसम्मान पाउने पनि गर्छ । साथै मनमा राखिने आस्थाले विचार र काममा शुद्धी ल्याउँछ ।
दहि खानु: घरबाट निस्कनु अघि वा कुनै शुभ कार्य अघि दहि खानु शुभ मानिन्छ । ठुलो विपद वा समस्या टर्ने विश्वास गरिन्छ । साथै शरिरको लागि पनि फलदायी हुन्छ दही ।
Prevआज ०२ बैशाख बिहिवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल
Nextपानको पातले एक रातमै खोल्नेछ बन्द किस्मतको ताला, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग